"သူရိယနေ၀န်း " ၊"ဆောင်းပါးရှင် ပြည်ရွှေဘို" နှင့် ဘာသာတရားတို့၏သိက္ခာ - News @ M-Media
“သူရိယနေ၀န်း ” ၊”ဆောင်းပါးရှင် ပြည်ရွှေဘို” နှင့် ဘာသာတရားတို့၏သိက္ခာ
in ဆောင်းပါး — December 14, 2015
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် စနေနေ့ထုတ် သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၇၇) ပါ ပြည်ရွှေဘို ရေးသားသော “ဘာသာကို မကာကွယ်ဘဲ ဘာသာကိုးကွယ်လို့ မရပါ(၆)” အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွင် အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် အစ္စလာမ် တမန်တော်ကိုသာမက အခြား ဘာသာတရားများ အပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားစေသော၊ တမင်စော်ကားထားသော ရေးသားချက်များ ပါဝင်နေပါသည်။
ထိုဆောင်းပါးသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ISIS အကြမ်းဖက်များ အကြောင်းကို ဇောင်းပေးရေးသားသည့်အသွင်ဆောင်ထားသော်လည်း အရေးအသားပညာကို မလှိမ့်တပတ် အသုံးချ၍ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ အပုပ်ချထားခြင်းများကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
ကျနော် လေ့လာမိသမျှ စာဖတ်သူတို့ကို ရှင်းလင်းထောက်ပြချက်နှင့်တစ်ကွ ဝေငှပါမည်။
“ရှင်းလင်းထောက်ပြချက်” ဖြစ်ပါသည် – ဖြေရှင်းချက် မဟုတ်ပါ။
ယင်းဆောင်းပါးရှိ “ISIS ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့်အတွေးအခေါ်” ခေါင်းစဉ်အောက် ဒုတိယအပိုဒ်တွင် “ISIS ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အတွေးအခေါ်ကို သိမှ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ်ကို သိနိုင်ပါမည်” ဟုလည်းကောင်း၊ တတိယပိုဒ်တွင် “ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်း မိုဟာမက် အသက်ရှိစဉ်အတိုင်း နေထိုင်ကြဖို့ဖြစ်သလို အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်းကောင်း ရေးသားထားသည်။
အစ္စလာမ်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ၊ ဂျူးဖြစ်စေ၊ ဟိန္ဒူဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေ ထိုဘာသာတရားများ၏ လွှမ်းမိုးကျယ်ပြန့်လာမှုကို သိလိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားများ၏ တန်ဖိုးများ၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ အစ္စလာမ် သာသနာပြန့်ပွားလာသည်မှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၄၅၀ ကျော် ကာလ ကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ အကြောင်းသိလိုလျှင် အစ္စလာမ် အကြောင်းကိုသာ လေ့လာရပါမည်။ ISIS အကြောင်းကိုလေ့လာလျှင် ISIS အကြောင်းကိုသာ သိပါမည်။ ISIS အဖွဲ့သည် မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အစ္စလာမ့်လောကရှိ ပညာရှင်အပေါင်း၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့ကလည်း အဆိုပါ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များမှာ အစ္စလာမ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ အဆုံးအမဟူသမျှနှင့် အလျဉ်းမကိုက်ညီဘဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေသည့် အုပ်စုများဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ်သာသနာ၊ မုစ်လင်မ်တို့နှင့် အလျဉ်းမသက်ဆိုင်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာရှုတ်ချခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်လည်း ၎င်းတို့အား ကန့်ကွက် ရှုတ်ချနေကြကြောင်း အတိုင်းသား တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ISIS နှင့်အလားတူအုပ်စုများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ (စာရေးသူ၏စကားအတိုင်း) စာရေးသူ၏ စကားအတိုင်း အသုံးပြုပြီး “၉၆၉ အဖွဲ့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အတွေးအခေါ်ကိုသိမှ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှု အန္တရာယ်ကို သိနိုင်ပါမည်” ဟုဆိုလျှင် စာရေးသူကိုယ်တိုင် လက်ခံနိုင်ပါ၏လော ? ထို့ကြောင့် ၎င်းဖော်ပြချက်သည် စုံလုံးကန်းနေသူ တစ်ဦး၏ ရေးသားချက်အဖြစ် ဝေဖန်သုံးသပ်ရပါသည်။
တဖန် “ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်း မိုဟာမက် အသက်ရှိစဉ်အတိုင်း နေထိုင်ကြဖို့ဖြစ်သလို အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုသော ရေးသားချက်သည် အစ္စလာမ် သာသနာအား လူသတ်သာသနာနှင့် အစ္စလာမ့်တမန်တော်အား လူသတ်ဖို့ ခိုင်းစေသူအဖြစ် အပြင်းထန်ဆုံး ပရမ်းပတာ စွပ်စွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ့်တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ငြိမ်းချမ်းစေသား)သည်လည်းကောင်း၊ သူ၏အလျင် ပွင့်ပေါ်လေခဲ့သမျှ တမန်တော်တို့သည်လည်းကောင်း ဖန်ဆင်းရှင်၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ပြီး သာသနာဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မွန်များဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင်၏ ဗျာဒိတ်တော်တစ်ရပ်အား ရှုပါလေ။
“မည်သူမဆို (အပြစ်မဲ့သူ)တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသက်ကို မတရားသတ်ဖြတ်ခဲ့လျှင် လူခပ်သိမ်းကို သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့လျှင် လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်သကဲ့သို့ဖြစ်၏” ကုရ်အာန်(၅း၃၂)
တမန်တော့်ရွှေနှုတ်တော်ထွက် သြ၀ါဒတစ်ရပ်ကိုလည်း ထပ်မံ ရှုစားပါလေ။
“ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှ မတရားသတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုအား ကျန်ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ထောက်ခံအားပေးလျှင် ထိုထောက်ခံအားပေးသူသည်လည်း သတ်ဖြတ်သူကဲ့သို့ အပြစ်ရှိ၏”။ စာဖတ်တတ်ပြီး အသိဥာဏ်ရှိသူတိုင်း ဤစကားနှစ်ရပ်ဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာအကြောင်းကို ရိပ်စားသိမြင်နိုင်ပြီဖြစ်၏။
“ဘာသာရေးအပိုင်း” ခေါင်းစဉ်အောက်စာပိုဒ်၌ “အပေါ်ယံအားဖြင့် မိုဟာမက် သေသွားပြီးတဲ့အခါ” ဟု ရေးသားထားသည်။ The Voice သတင်းစာပါရေးသားချက်ထက်ပင် ပို၍ ရိုင်းစိုင်းနေပါသည်။
ထိုစာပိုဒ်ထဲမှာပင် စွန္နီ – ရှီအာ ကွဲပြားမှုကို မိမိဖာသာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းထွင် ရေးသားထားပြန်ပါသည်။
ဒုတိယစာပိုဒ်တွင်တော့ စွန္နီနှင့်ရှီအာကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရန်တိုက်ထားခြင်းအား တွေ့ရပြန်ပါသည်။ ဤသည်ကို မဆီမဆိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ထေရ၀ါဒနှင့် မဟာယန ဂိုဏ်းကွဲမှုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရေးသားထားသည်။
(မုစ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအံ့သော) တမန်တော် မုဟမ္မဒ်၏မြေးတော် ဟုစိုင်းန်အား အာဏာရူးဖြစ်သူ ယဇီးဒ်နှင့်နောက်လိုက်များက ကရ်ဘလာဟူသောအရပ်သို့ ဖြားယောင်းခေါ်ယူကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်အထိ မွတ်စ်လင်မ် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် စွန္နီ၊ ရှီအာ အုပ်စုများအဖြစ် သီးသန့်ရပ်တည်မှု မရှိသေးပါ။ သို့ဆိုလျှင် စွန္နီတို့က ဟုစိုင်းန်သခင်ကိုသတ်၍ ရှီအာတို့က မကျေနပ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ရန်ဖြစ်ရသည့်သဘောမျိုးရေးသားချက်မှာကား (မည်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ) အစ္စလာမ်သမိုင်းကို လေ့လာထား သူတိုင်း အဖို့ အပြင်းစားဟာသတစ်ခု ဖြစ်သွားပါသည်။ စာရေးသူမှာ ထင်ရာရမ်းတုပ်သူဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ပေါ်လွင်နေပါသည်။
တတိယပိုဒ်မှာ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကို တင်ပြပြီး စတုတ္ထပိုဒ်တွင်တော့ ဖန်ဆင်းရှင်အယူဝါဒကို လက်ခံထားသည့် ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်နှင့် အစ္စလာမ် – ဘာသာတရားသုံးရပ်စလုံးကို ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒဖြင့် ဆက်နွှယ်၍ မသိမသာ ရှုတ်ချရေးသားထားသည်။ ပဉ္စမပိုဒ်တွင် “ဘုရားသခင်ကို (ယုံကြည်မှု) ဆိုတဲ့ (ကိုးကွယ်မှု)ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ (အကြောက်)တရားနဲ့ ဘာသာကို (ထိန်းကျောင်း)ထားသည်ပါ” ဟူသော ရေးသားချက်ဖြင့် ဘာသာတရားသုံးခုစလုံး၏ အနှစ်သာရနှင့်ဆန့်ကျင်ကာ စွပ်စွဲစော်ကားထားပါသည်။
ထိုဘာသာတရားသုံးရပ်စလုံးက အမှန်ပင် ဖန်ဆင်းရှင်အယူဝါဒကို အခြေတည်ထားပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသည် ဖန်ဆင်းရှင် အယူဝါဒကို အခြေတည်မထားသည့်အပြင် ဘုရားဟောတရားဓမ္မများတွင်လည်း ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားချက် အလျဉ်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မတူညီသော အခြေခံအယူဝါဒများကို အတင်းအဓမ္မ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြနေခြင်းသည် ဦးနှောက်အခန်းပျက်နေသူတစ်ဦး၏အတွေးအခေါ်သာ ဖြစ်သည်။
ဆဋ္ဌမအပိုဒ်မှာ အစ္စလာမ်ကို အစွန်းအရောက်ဆုံးဟု စကားခံပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်လည်း အစွန်းရောက် ဘာသာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပြန်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစွန်းရောက်သည့်ဘာသာတရားတစ်ခုမျှ မရှိပါ။ လူသားများသာ အစွန်းရောက်ပြီး ရန်ပွဲ၊ သတ်ပွဲ၊ စစ်ပွဲများ ဖြစ်နေကြခြင်းပင်။ လူတို့၏လုပ်ရပ်များဖြင့် ဘာသာတရားကို အခါခပ်သိမ်း ချိန်ထိုးဝေဖန်သတ်မှတ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ရပါသည်ဟုဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏လေးနှစ်တာကာလအတွင်း (လက်ရှိအချိန်ထိ) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ(အချို့)မှ အခြားဘာသာတရားနှင့်ဘာသာဝင်များအပေါ် မရပ်မနား စော်ကားဖိနှိပ်ချိုးနှိမ် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းများကိုကြည့်ပြီး “ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဤသို့သောဘာသာတရားမျိုးဖြစ်သည်” ဟု ဝေဖန်လျှင် စာရေးသူမှ မည်သို့အဖြေပေးမည်နည်း။ “လူတို့၏ လုပ်ရပ်များဖြင့် ဘာသာတရားကို အခါခပ်သိမ်း ချိန်ထိုးဝေဖန်သတ်မှတ်၍ မရပါ” ဟူ၍ ကျွန်ုပ်၏ ရေးသားချက် အတိုင်း(ထိုသဘောတရားအတိုင်း)သာ စာရေးသူဖက်မှ မုချဧကန် ဖြေကြားပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါစာမျက်နှာ ပဉ္စမကော်လံနောက်ဆုံးပိုင်းနှင့် ဆဌမကော်လံအထက်ပိုင်းတွင် အာဖဂန်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပျောက်ရခြင်းကို “အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုလိုက်သတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ရတယ်။ ထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေ မြေမြှုပ်ဝှက်ခဲ့ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့လဲလျောင်းတော်ရုပ်ပွားတော်တွေကို ဂျာမန်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေက လိုက်ရှာလျက်ရှိကြရာ ယနေ့အထိတော့ မတွေ့ကြသေးပါဘူး” ဟူ၍ လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်းနှင့် ရေးသားပြန်ပါသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်သမိုင်းကို မဖတ်ရှုဖူးသူများသာ ဟုတ်နိုးနိုးဖြင့် ယုံကြည်ကြပါမည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်သည် တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစိုးသောနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်လာရသောသမိုင်းတွင် မည်သည့်သွေးချောင်းစီးမှုမျှ မရှိခဲ့။ ၎င်းတို့ပြည်သူပြည်သားတို့မှ ဆန္ဒအလျောက် ကူးပြောင်းကုန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကို လိုက်သတ်ပြီး” ဟူသောရေးသားချက်မှာ ဗြောင်လိမ်စကားဖြင့် အမုန်းတရား သပ်လျှိုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်နေပေသည်။ တစ်ခါ “ထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေ မြေမြှုပ်ဝှက်ခဲ့ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့လဲလျောင်းတော် ရုပ်ပွားတော်တွေကို ဂျာမန်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေက လိုက်ရှာလျက်ရှိကြရာ ယနေ့အထိတော့ မတွေ့ကြသေးပါဘူး” ဟူသောရေးသားချက်မှာပင် အဖြေပေါ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောဖြစ်စဉ်မျိုး မရှိခဲ့၍ ရှာမတွေ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦးပင် အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ပေမည်။
နောက်တစ်ပိုဒ်မှာ “ကိုယ့်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းတောင် လေးစားမှုမရှိကြတဲ့ အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်တွေဟာ တခြားဘာသာဆိုရင် လေးစားဖို့ဝေလာဝေး လွှမ်းမိုးဖို့ ဦးတည်နေကြတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နေကြရပါပြီ” ဟူသော ရေးသားချက်ဖြင့် ဘာသာတရားများအချင်းချင်း တမင်ရန်တိုက်နေခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်လွင်နေလျက်ရှိသည်။
သို့ဆိုလျှင် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်သည့်ခေတ်ကာလမှစ၍ ယနေ့ချိန်အထိ (ကမ္ဘာပေါ်တွင် နှစ် အရှည်ကြာဆုံးပြည်တွင်း စစ်ပွဲများ အပါအ၀င်) ဖြစ်ခဲ့သမျှ ပြည်တွင်းပြည်ပစစ်ပွဲများ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်မှာ မည်မျှအထိပင် ရှိနေပါသနည်း ? စာရေးသူ၏စကားအတိုင်း အတိအကျမှီးယူ၍ “ကိုယ့်ဘာသာဝင် အချင်းချင်းတောင် လေးစားမှုမရှိကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ တခြားဘာသာဆိုရင် လေးစားဖို့ဝေလာဝေး လွှမ်းမိုးဖို့ ဦးတည်နေကြတာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်းတွေ့မြင်နေကြ ရပါပြီ” ဟု ဆိုပါလျှင် မည်သို့ရှိခြိမ့်နည်း။ ဤဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ(အချို့)၏ လက်ချက်ဖြင့် အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ဘ၀ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြရကုန်သော ခရစ်ယာန်များ၊ မုစ်လင်မ်များသည်ပင် ထိုသို့ တရားဝင်ရေးသားပြောဆိုမှုဟူ၍ မကြားဖူးသေးပါ။ သို့ဖြစ်ရာ စာရေးသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းစဉ်အောက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ တန်ဖိုးကို ပြန်လည်ဖျက်ဆီးသည့် အသွင် ဆောင်နေပါတော့သည်။
၎င်း၏အောက် “ISIS ဆိုတာဘာလဲ” ခေါင်းစဉ်အောက် အစပိုဒ်၌ “အစ္စလာမ်မစ်သောင်းကြမ်းသူတွေကို လေ့လာရင် အစ္စလာမ်ဘာသာကို မလေ့လာလို့မရပါ” ဟု ရေးသားထားပြန်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးတွင် ထိုစာသားအား အကြိမ်ကြိမ်ရေးသားနေခြင်းကိုကြည့်လျှင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ မီးမွှေးနေကြောင်း သိသာပါသည်။ (မှတ်ချက် – စာလုံးပေါင်း အမှန်မှာ သောင်းကျန်းသူ ဖြစ်ပါသည်။ စာလုံးပေါင်းပင် မှန်အောင် မရေးနိုင်သေးသည် ကိုကြည့်၍ ရေးသားသည့်အကြောင်းအရာ အဘယ်သို့ မှန်ကန်နိုင်တော့မည်နည်းဟု တွေးတောမိပါသည်)။
အထက်ပါအချက်အလက်များကို ထောက်ရှုပါလျှင် ထိုဆောင်းပါးကို ရေးသားနေသူ ပြည်ရွှေဘိုသည် လည်းကောင်း၊ သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ်သည်လည်းကောင်း အများပြည်သူတို့အတွင်း အမုန်းတရားများကို မှိုင်းတိုက်ရိုက်သွင်းလျက်ရှိကြောင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာသော မတည်ငြိမ်မှု (၀ါ) ပဋိပက္ခကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ် ဦးတည်နေပုံရကြောင်း ငြင်းမရအောင် ထင်ရှားနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံးနီးပါးတို့သည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေတည် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အငမ်းမရ ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှုတို့ဖြင့် အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားစီ ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရသစ်ပြောင်းလဲရန်လည်း လအနည်းငယ်သာ လိုတော့သည်။ ယခုလိုစပ်ကူးမတ်ကူး အပြောင်းအလဲကာလသည် ဘာသာရေး မဆိုထားနှင့်၊ နိုင်ငံရေးအရပင် ထိလွယ်ရှ လွယ်လွန်းသော အနေအထားဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာသော ကြီးကြီးမားမား ပဋိပက္ခဖြစ်သည်နှင့် နိုင်ငံ့ အနာဂတ်ကောင်း၏ လမ်းကြောင်း ချော်ထွက်ပျက်ပြားသွားနိုင်သည်။ အမှိုက်ကစ ပြသာဒ် မီးလောင်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၎င်းဆောင်းပါးရှင်နှင့် သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်(အပါအ၀င် အလားတူ ပုံနှိပ်မီဒီယာများ)သည် မြန်မာနိုင်ငံအား တိုးတက်စေချင်လိုသူလော သို့တည်းမဟုတ် ချိုးဖျက်ချင်သူလောဟု မေးခွန်းထုတ်လိုက်ရပေသည်။
**စာရေးသူ၏ FB စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Tags: Media_To_Monitor, TheSunRays